Icubungula Izingxenye Zomshini, Ukucubungula Izingxenye Eziqondile - K-Tek
I-K-Tek Machining Co., Ltd. yasungulwa ngo-2010, etholakala ku- "World Factory" -Dongguan, eChina, ehlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-20,000, akhethekile ekucubunguleni izingxenye zemishini futhi isidlulile isitifiketi se-ISO9001: 2015 .
Singakwazi ukwenza ngokwezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokwezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha.
Ukuqhutshwa Kwekhwalithi Ephakeme
Ukuze kuqinisekiswe izidingo zekhwalithi yamakhasimende ethu, singenise imishini yokucubungula ethuthukile nemishini yokuhlola efana ne-Five-axis Machine (DM), i-CNC, i-WEDM-LS, i-Mirror EDM, i-Grinder yangaphakathi / yangaphandle, i-Laser Cutting, i-3D CMM, I-Height Gauge ne-Material Analyser njll kusuka e-Germany, Japan, Switzerland nase-United States.
CNC Milling & Ukuvula
5-eksisi CNC machining isikhungo inikeza ngokunemba machining of ngokunemba high futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi.
Nikeza ngamasevisi e-3-axis ne-4-axis CNC.
CNC Ukuvula (2-12Axis)
Nikeza ngo-1-400 (mm) i-CNC yokuguqula nokugaya ukwakhiwa kokuhlanganiswa
Nikeza ngokunemba ukugaya izimbobo nemibuthano engaphandle.
Nikeza ngokunemba ngocingo ukusika imishini.
Ukwelashwa Kokushisa & Qeda
IsiPolish, i-anodise, i-passivation, i-zinc / i-nickel / i-chrome ne-plating yesiliva, ukwelashwa kokushisa njll.
Ukuqondiswa kwabantu, ukuqamba okuqhubekayo, ikhwalithi nokusebenza kahle, iKhasimende kuqala.
Ukuze usinde ngekhwalithi, ukwaneliseka kwamakhasimende kufinyelele ngaphezu kuka-95%, lwela ukuthola ukwaneliseka kwamakhasimende ayi-100%. Uhlelo lwekhwalithi lusungulwa ngesisekelo se-ISO9001: 2015 futhi isethelwe imikhiqizo ephezulu kakhulu yokwenza izinto, ihlose ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngezinga eliphezulu. Uhlelo lwekhwalithi lisebenzisa inqubo esekwe ekulawuleni ikhwalithi, ehlanganisa ukusebenza kwebhizinisi lenkampani, ukukhiqiza nokukhiqiza, ukusebenzela amakhasimende, imvelo kanye nokuqapha kwe-5S, njll.
3 Amaphuzu Micrometer Yangaphakathi
Ngokwazisa bonke ozakwethu ngemizamo kanye neminikelo emsebenzini we-K-TEK, kanye nokukhuthaza ukuxhumana phakathi kozakwethu, kuqinise ukuxhumana kanye ne-dockin ...
Ngemuva kweminyaka eyishumi yentuthuko, i-K-Tek ayinenani elikhulu kuphela labasebenzi abaqeqeshiwe nabezobuchwepheshe neqembu elihle kakhulu labaphathi, kepha futhi uneqembu lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuze uvumele ...